prime life insurance(prime life insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्राइम लाइफको नाफामा ३६.२६% को वृद्धि, इपीएसमा गिरावट
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म २१ करोड ६३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो कम्पनीले १५ करोड ८७ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । यो हिसाबले कम्पनीले नाफातर्फ ३६.२६ प्रतिशतको प्रगति गरेको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा प्राइमले कुल बिमा शुल्क आर्जन चाहि २ अर्ब ३७ करोड गरेको छ । अघिल्लो...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ६० लाख कित्ता आइपीओ आउँदै
काठमाडौँ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउने भएको छ । आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न इन्स्योरेन्सले जेठ १० गतेका साधारण सभाको मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । २ अर्ब चुक्ता पूजी पु¥याउनका लागि इन्स्योरेन्सले ६० करोड रुपैयाँ बराबरका ६० लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभामा लैजाने...
प्राइम लाइफको नाफामा ३३.२२ % को वृद्धि, अन्य सूचक झनै तगडा
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा १४ करोड ३१ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.२२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष प्राइमको खूद नाफा १० करोड ७४ लाखमा सीमित थियो । प्राइमले तेश्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ५८ करोड कुल बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो...
प्राइम लाइफको हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आज(फागुन २७ गते)देखि १ बराबर १.६ कित्ताको दरले हकप्रद सेयरको बिक्री खुलाएको छ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ९७ लाख ६३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद निश्कासन गरेको हो । इच्छुक सेयरधनीले २०७५ बैशाख २ गतेभित्र तोकिएका स्थानमा गएर हकप्रद खरीदका लागि आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । हाल यो कम्पनीको...
चैत १४ गते प्राइम लाइफको साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी चैत १४ गते बुधबारका दिन एघारौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले काठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा साधारणसभा डाँकेको हो । कम्पनीको फागुन १८ गते शुक्रबार बसेको १०८ औं बोर्ड बैठकले एघारौं साधारणसभाको मिति तथा एजेण्डाहरुको बिषयमा टुंगो लगाएको हो । प्राइम लाइफको...
प्राइम लाइफको नाफा १ अर्ब, बिमा कोष १० अर्ब बढी !
काठमाण्डौ । देशको अधिकांश जनसंख्या बिमाको पहुँचबाहिर छ । यहीकारण देशका बिमा कम्पनी स्थापनाको लहर नै चलेको छ । कम्पनीहरुले विभिन्न स्किममार्फत आफ्नो व्यवसाय बिस्तारको आक्रामक रणनीति समेत बनाइरहेका छन् । यहीकारण कम्पनीहरुले संभावित आम्दानीको प्रक्षेपण समेत निकै हौसिएर गरिरहेका छन् । यही क्रममा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले चालुु आर्थिक...
फागुन २७ देखि प्राइम लाइफको हकप्रद निश्कासन
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी फागुन २७ गतेदेखि १ बराबर १.६ कित्ताको दरले हकप्रद सेयरको बिक्री खुलाउने भएको छ। यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ९७ लाख ६३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्न लागेको हो । इच्छुक सेयरधनीले २०७५ बैशाख २ गतेभित्र तोकिएका स्थानमा गएर हकप्रद खरीदका लागि आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ...
१६० % हकप्रदका लागि प्राइमले तोक्यो बुक क्लोज मिति
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले जारी गर्न लागेको १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरका लागि बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । नेप्सेमा आइतबार प्रकाशित सूचना अनुसार यो कम्पनीले आगामी फागुन १७ गतेलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । यसको अर्थ फागुन १६ गतेसम्म यो कम्पनीको सेयर खरीद गर्नेहरुले हकप्रद सेयर खरीदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । धितोपत्र...
प्राइम लाइफलाई १६० % हकप्रद निश्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सलाई १६० प्रतिशत हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृतिसँगै प्राइम लाइफले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६१ लाख २ हजार कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्नेछ । एक बराबर १.६० कित्ताको दरले जारी हुने हकप्रदको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमीटेडले गर्नेछ ...
प्राइम लाइफले ३२.५ % बोनस दिने, हकप्रद भर्नेले पनि पाउने
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई ३२.५ प्रतिशतको दरले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको माघ २४ गते सम्पन्न १०६ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सञ्चित मुनाफाबाट २०७४ असार मसान्तसम्मको चुक्तापुँजीको ६१ करोड २ लाखको ३२.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि आवश्यक नगद लाभांश वितरणको निर्णय...
नाफामा प्राइम लाइफको चमात्कारिक प्रगति, अन्य सूचक पनि मजबुत
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा नाफातर्फ चमात्कारिक प्रगति गरेको छ । यो अवधिमा प्राइमको खूद नाफा ११ करोड ५१ लाख भएको हो, जबकि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको नाफा ३ करोड ६१ लाखमा सीमित थियो । यो जीवन बिमा कम्पनीका अन्य सूचकहरुतर्फको नाफा समेत उत्साहप्रद छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ९३...
बिमा कम्पनी हकप्रदको बाढी ल्याउँदै, प्राइम र नेशनल एकसाथ पुगे धितोपत्र बोर्ड
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा आकर्षक मूल्यमा खरीदबिक्री भइरहेका दुुई जीवन बिमा कम्पनीले निकै ठूलो परिमाणमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएका छन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले क्रमशः १६० र ६० प्रतिशत हकप्रद निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा कात्तिक २७ गते एकसाथ आवेदन दिएका हुन् । बिमा समितिले बिमा क�...
प्राइमले २५ प्रतिशत बोनस दिने
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको घोषणा गरेको छ । साउन १२ गते बसेको सो बिमा कम्पनीको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसका लागि आवश्यक नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । यो निर्णय बिमा समिति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा...